WABIXIN: Shanta Kooxood Ee Wayn Ee Premier Leaque-ga Oo Guulo Isku Faanay, Chelsea & Arsenal Oo Rekoodho Cusub Dhigay, Waxa Laga Filan Karo Kulamada Soo Socda Iyo Miiska Kala Saraynta PL Kadib Kulamadii 18 Aad.
WABIXIN: Shanta Kooxood Ee Wayn Ee Premier Leaque-ga Oo Guulo Isku Faanay, Chelsea & Arsenal Oo Rekoodho Cusub Dhigay, Waxa Laga Filan Karo Kulamada Soo Socda Iyo Miiska Kala Saraynta PL Kadib Kulamadii 18 Aad. 0 Wednesday 28th December, 2016 in Wararkii Maanta by Xarunta Dhexe Visits: 199
WABIXIN: Shanta Kooxood Ee Wayn Ee Premier Leaque-ga Oo Guulo Isku Faanay, Chelsea & Arsenal Oo Rekoodho Cusub Dhigay, Waxa Laga Filan Karo Kulamada Soo Socda Iyo Miiska Kala Saraynta PL Kadib Kulamadii 18 Aad. Xamaasada horyaalka Premier Leaque-ga ayaa gashay meel xaas saasi ah waxayna koox kastaaba ka cabsanaysaa in wax guuldaro ahi soo gaadho si ay kooxaha kale ee ay la tartamaysaa uga goosan. Hal guuldaro oo soo gaadhay kooxaha waa wayn ayaa faa’iido u ah dhamaan kooxaha kale, laakiin kulamadii 18 aad ayaa ee Boxing Day-ga ayaa noqday kuwo farxad galiyay dhamaan shanta kooxood ee Premier Leaque-ga ugu tunka wayn oo guulo iskugu faanay.
Laakiin waxaa kala duwanayd qaabka guulaha loo gaadhay iyo goolasha lagu gaadhay iyada oo kooxaha qaar ay dhibaato wayni soo gaadhay ka hor inta ayna guulahan gaadhin halka kuwo kale ay soo gaadheen guulo ay ku soo raaxaysteen. Haddaba shabakada ciyaaraha Gool24.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa xog la xidhiidha kulamadii 18 aad ee premier Leaque-ga iyo waxa laga filan karo kulamada 19 aad ee kala badhka xili ciyaareedkan. Waxaan kooxaha u soo kala horaysiin doonaa sida ay kaalmaha ugu kala sareeyaan.
1-CHESLEA 3-0 BOURNEMOUTH:
Chelsea ayaa gaadhay guusheedii 12 aad oo xidhiidh ay iyada oo Antonio Conte uu rekoodh cusub u dhigay kooxda Stamford Bridge ka dhisan ee Blues. Chelsea ayaa 3:0 ku garaacday kooxda Bournemouth si ay u sii ilaashato dhibcaha lixda ah ee ay hogaanka Premier Leaque-ga ku hayso. Pedro Rodriguez oo laba gool dhaliyay iyo Eden Hazard oo rekoodhe shabaqa ku taabtay ayaa Blues ka caawiyay in ay gaadhaan guushoodii 12 aad oo xidhiidh ah taas oo Conte ka dhigtay macalinkii ugu horeeyay ee Blues la soo guulaystay 12 kulan oo Premier leaque-ga ah oo xidhiidh ah.
Kooxda Chelsea ayaa fariin cad u dirtay dhamaan kooxaha uu hungurigu kaga jiro koobka Premier Leaque-ga waxayna dadkii ka shakisanaa markale u cadeeyeen in gacantoodu tahay gacanta ugu dhaw ee koobka Premier Leaque-ga hantiyi karta. Bandhigii Eden Hazard uu ku noqday xidigii garoonka ugu fiicnaa ayaa muujiyay muhiimada uu kooxdiisa ku leeyahay iyada oo Willian iyo Fabregas ay dhinacooda ka cadeeyeen in Chelsea ayna ku tiirsanayn kaliya Costa iyo Kante oo ganaax ku maqnaa.
Chelsea ayaa waqti xaadirkan isku darsatay ciyaar wanaag iyo natiijo fiican, wuxuuna Antonio Conte bartilmaameedsanayaa in uu marka hore gaadho guulihii xidhiidhka ahaa ee abid ay koox Premier leaque-ga ahi gaadho oo ay Arsenal ku haysato 14 kulan guulo xidhiidh ah waxayna u jiraan laba kulan oo kaliya.
Pedro Rodriguez ayaa dib ugu soo laabtay ciyaartoygii uu ku ahaan jiray Barcelona ama mid ka fiican wuxuuna kulankan ka dhaliyay laba gool si uu u sii wato qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ee xili ciyaareedkan. Chelsea ayaa 18 kulan oo Premier leaque-ga ah ka soo heshay 46 dhibcood laakiin waxa cajiibka ah ayaa ah in 12 kii kulan ee ugu danbeeyay ay soo heleen 36 dhibcood halka lixdii kulan ee ugu horeeyay ay ka soo heleen 10 dhibcood oo kaliya.
2- LIVERPOOL 4-1 STOKE CITY:
Liverpool ayaa soo daawatay dhamaan kooxaha waa wayn ee Premier leaque-ga ee ay la tartayso oo soo guulaystay, waxayna markeeda Anfield ku dhex jiid jiiday kooxda Stoke City oo waliba gool kaga hormartay Liverpool. Klopp iyo ciidamadiisa ayaa awooday in ay cadaadiska ku sii hayaan Cheslea isla markaana ay kaalinta labaad kala baxaan Manchester City oo si ku meel gaadh ah u sii haysay.
Adam Lallana, Roberto Firmino iyo Daniel Sturridge oo min hal gool dhaliyay ayaa Reds ka caawiyay in ay helaan saddex dhibcood oo xili ciyaareedkooda aad muhiim ugu ah waxaana sidoo kale goolka kale iska dhaliyayGilbert Gianelli Imbula. Liverpool ayaa tan iyo horaantii sanadkan aan wax guuldaro ah ku arkin Anfield waxayna ka dhigatay xarunta guusha ee ay dhibcaha ugu badan ku heshay.Liverpoo ayaa muddadii uu Klopp yahay dhalisay 100 gool.
Jawaabtii ay Liverpool ka bixisay goolkii ay Stoke City kaga homartay iyo qaabkii ay dhamaan ciyaartu intii ay socotay u maamulaysay ayaa muujisay in Klopp iyo kooxdiisu ay tartan xoogan ugali karaan koobka ay kaalinta labaad kaga jiraan. Pep Guardiola oo ka soo xaadiray Anfield si uu u sii qiimeeyo ciyaartoyda Liverpool ee ka hor kulanka kooxdiisa ayaa Anfield ka baxay isaga oo daawaday kulan ay Reds awood ku soo bandhigtay.
Kadib kulankii Everton ayay markale Liverpool heshay guul ay kalsooni buuxda ku sii heshay,waxayna Liverpool sanadkan 2016 dhalisay 86 gool oo Premier Leaque-ga ah waana kooxda goolasha ugu badan dhalisay iyada oo tan iyo sanadkii1985 kii dhalisay goolashii ugu badnaa markaas oo ay 87 gool hal sano ku dhalisay. Reds ayaa 18 kulan ka helay 40 dhibcood iyaga oo waliba dib u helay qaab ciyaareedkoodii fiicnaa. Laakiin dhibaatada kubbada sare ee Liverpool ayaa wali ah dhaliisa kooxda Klopp ee Reds.
3- HULL CITY 0-3 MANCHESTER CITY:
Manchester City ayaa iyaduna guul muhiim ah balse ay xili danbe gool dhalinta bilawday ka soo gaadhay kooxda heerka labaad u soo hoobanaysa ee Hull City waxayna Sky Blues soo gaadhay guul xili danbe ku qaadatay si ay u jabiso difaacasho adag oo ay kala hortimid Hull City. Iyada oo ay 18 daqiiqo ka hadhsan yihiin ciyaarta ayay Manchester City ugu danbayn dhulka dhigtay Hull City oo ku faraxsanayd in ay barbaro gool la’aan ah ay ku qabto Guardiola iyo kooxdiisa City.
Manchester City ayaa sii joogtaysay qaab ciyaareedkii fiicnaa ee ay Arsenal guusha wayn kaga gaadhay waxaana guusheedii u sii wadayYaya Toure oo gool rekoodhe ahaa culayska kaga dulqaaday kooxdiisa Man City halka da’yarkaKelechi Iheanacho uu si deg deg ah u raacsaday goolka labaad ee ay Manchester City sida rasmiga ah ugu xaqiijisatay guushan.Dhamaadkii ciyaarta waxaa goolka saddexaad ee ciyaarta soo gabagabeeyay iska dhaliyayCurtis Davies kaas oo musiibada kooxdiisa cusbo sii mariyay.
Kooxda Guardiola ayaa muujisay sida ay uga go’antahay in ay ka dheeraato qaladaadkii ay guuldarooyinka kula soo kulantay waxayna sii xejisteen booska kaalinta saddexaad inkasta oo si ku meel gaadh ah ugu sii jireen kaalinta labaad ka hor kulankii Liverpool. Manchester City ayaa 18 kulan ka soo heshay 39 dhibcood waxayna 7 dhibcood ka hoosaysaa kooxda hogaanka PL haysa ee Chelsea.
4- ARSENAL 1-0 WEST BROM:
Arsenal dib ugu soo laabtay tubta guusha kadib waji gabixii ka soo gaadhay kulamadii Everton iyo Manchester City laakiin markale Gunners ayaa guul ay ku rafaaday isla markaana ay xili danbe ku qaadatay ka gaadhay kooxda West Brom waxaana Arsenal guushan muhiimka ahayd ka soo caawiyay Olivier Giroud kaas oo kala badbaadiyay Arsene Wenger iyo jamaahiirta Gunners ee markii horeba ka niyadjabtay hanaanka kooxda Wenger ee kulamadii ugu danbeeyay.
In Arsenal ay soo guuldaraysatay laba kulan oo muhiim ahaa isla markaana ay Emirates Stadium dirqi guul ugaga gaadhay West Brom ayaa sii kordhisay shakigii laga qabay in dhaqankii kooxda Arsene Wenger ee xili ciyaareedyadii la soo dhaafay uu wali sii socon karo. Waxa ugu muhiimsan ayaa ahaa in Wenger iyo kooxdiisu ay kulamadii saddexaad oo xidhiidh ah guulaysan waayaan iyada oo kooxaha waa wayn oo dhami ay soo guulasanayeen waqtigii iyaga ku adkaa.
Arsenal ayaa noqotay kooxdii ugu horaysay taariikhda Premier Leaque-ga ee dhamaan kulamadii horyaalka Premier Leaque-ga ee ay ka hortimid kooxda West Brom shabaqa ka soo wada taabtay waana kooxda kaliya ee boqolkiiba boqol kulamadii ay kooxdan ka hor timid goolal kaga soo wada dhalisay 21 kulan oo ay Premier Leaque-ga iskaga horyimaadeen. Ma Jirto koox kale oo Premier leaque-ga ah oo koox kale kulan kasta shabaqa ka soo taabtay sida ay Arsenal ku samaysay West Brom.
Sidoo kale Arsenal ayaa kulankii West Brom ku noqotay kooxda labaad ee Premier Leaque-ga guulaha ugu badan garoonkeeda ku gaadhay iyada oo ka danbaysa kaliya Manchester United oo ah kooxda kulamada ugu badan ee Premier Leaque-ga garoonkeeda guulo ku soo gaadhay.Gunners ayaa West Brom ka gaadhay guusheedii 300 aad ee garoonkeeda ay ku gaadhay kulamada horyaalka Premier Leaque-ga si ay u noqoto kooxda labaad ee abid guulaha ugubadan garoonkeeda ku gaadhay kulamada PL ee ugu badan.
5- MANCHESTER UNITED 3-0 SUNDERLAND:
Manchester United ayaa sii wadata qaab ciyaareedkii fiicnaa ee ay ku soo jirtay kulamadii ugu danbeeyay ee Premier Leaque-ga wuxuuna ugu danbayn Mourinho helay shaxdiisa ugu fiican ee uu kula tartami karo kooxaha waa wayn ee wali dhibcaha badan ka horeeya. Inkasta oo ay Manchester United soo dhibtootay bilawgii xili ciyaareedkan ayuu Mourinho xili fiican helay xal uu kaga soo kabsan karo culayskii iyo cadaadiskii uu kala soo kulmay natiijo xumadii kooxdiisa.
Man United guul wayn Old Traffrod kaga gaadhay kooxda dhibtoonaysa ee Sunderland iyada oo Daley Blid, Zlatan Ibrahimovic iyo Henrikh Mkhitaryan oo min hal gool dhaliyay ay Mourinho iyo kooxdiisa Red Devils ka caawiyeen in ay dhinac iskaga dhigaan kooxda Sunderland waxayna guushan ku gaadheen 3:1 bilaa jawaab ah. Manchester United ayaa ku ciyaaraysa qaab ciyaareed gabi ahaanba ka duwan sidii ay laba bilood ka hor ahayd.
Waxaa isbadalka dhabta ah ee Manchester United kuu cadayn kara in shan kulan oo xidhiidh ah ay soo guulaysatay isla markaana ayna wax guuldaro ah la kulmin 11 kii kulan ee ugu danbeeyay tartamada oo dhan. Xogta Man United ayaa muujinaysa in Mourinho uu ugu danbayn helay qaab uu ku sixi karo waxyaabihii ka qaldamay bilawgii xili ciyaareedkan waxaanad halkan kaga bogan kartaa natiijoonka muujinaya sida ay Red Devils u soo kabsatay.
November 6: Swansea 1-3 Man United
November 19: Man United 1-1 Arsenal
November 24: Man United 4-0 Feyenoord
November 27: Man United 1-1 West Ham
November 30: Man United 4-1 West Ham
December 4: Everton 1-1 Man United
December 8: Zorya 0-2 Man United
December 11: Man United 1-0 Tottenham
December 14: Crystal Palace 1-2 Man United
December 17: West Brom 0-2 Manchester United
December 26: Man United 3-1 Sunderland
Laakiin waxa kaliya ee Mourinho iyo kooxdiisa walwalka ku haya ayaa ah in kaalinta lixaad baaqi ku sii yihiin iyada oo aan xataa Tottenham ciyaarin kulankeedii 18 aad waxaana tan kaga sii daran in Red Devils ay wali 13 dhibcood ka hoosayso kooxda hogaanka Premier Leaque-ga haysa ee Chelsea halka ay kaalinta afraad u jirto 4 dhibcood oo ay ka danbayso Arsenal. Man United ayaa 18 kulan ka soo heshay 33 dhibcood.
MIISKA KALA SARAYNTA PREMIER LEAQUE-GA EE KADIB KULAMADII 18 AAD:
MAXAA LAGA FILAN KARAA KULAMADA 19 AAD EE KALA BADHKA PREMIER LEAQUE-GA?
Kooxda hogaanka Premier Leauque-ga hogaaminaysa ee Chelsea ayaa laga filan karaa guusheedii 13 aad oo xidhiidh ah marka ay sabtida Stamford Bridge ku soo dhawayso Stoke City. Marka la eego hanaanka ciyaareed ee ay Blues ku jirto natiijadii cuslayd ee ay Stoke City kala kulantay Liverpool waxaa la filan karaa in Blues ay sii wadan doonto guulaheeda xidhiidhka ah.
Laakiin kooxaha kaalinta labaad iyo saddexaad ku kala jira ee Liverpool iyo Manchester City ayay qasab tahay in ay dhibco lumiyeen iyaga oo ugu yaraan barbaro gali kara ama haddii ay mid kood guulaysato waxaa dhibco waayi doonta kooxda guuldaraysata. Kulamada kooxaha waa wayn ee xili ciyaareedkan ayaa ah muhiimada ugu wayn iyada oo kooxaha ciyaaraya iyo kuwa kaleba ay natiijadooda ku xisaabtamayaan. Kulanka Anfield ayaan si dhab ah loo saadalin karin balse marka la eegi qaab ciyaareedka Liverpool ee Anfield iyo qaabkii ay Man City ugu soo dhibtootay Hull City ayay Reds haysataa woxogaa faa’iido dheeraad ah.
Manchester United ayaa heli doonta fursad kale oo ay Old Traffrod ugu soo dhawayn doonto kooxda Middlesbourgh iyada oo Mourinho iyo kooxdiisa Red Devils ay yihiin kooxda ugu cad cad ee saddexda dhibcood qaadan karta halka sidoo kale Arsenal ay Emirates Stadium ku soo dhawayn doonto kooxda uu la wareegay Sam Allardyce ee Crystal Palace oo bilawday in ay guushii ugu horaysay gaadho kulamo badan kadib. Inkasta oo la filan karo guul ay Arsenal gaadho haddana ma aha fursad wayn iyada oo daqiiqadii 86 aad ay ku gaadhay in ay West Brom guul ka gaadho basle Wenger ayaa dalban doona isbadal wayn.
TAARIIKHDA IYO WAQTIGA LA CIYAARI DOONO KULAMADA 19 AAD EE PREMIER LEAQUE-GA:
Send to your friend Related [War Iminka Soo Dhacay] Aaladaha Whats App Iyo Noocyada Kale Ee Lagu Wada Xidhiidho Oo Dawladaha Yurub Soo Bandhigeen In May 29, 2017